1.1 M2TS ka MKV
1.2 Best M2TS Ntụgharị
1.3 M2TS ka MP4
1.4 M2TS ka AVI
1.5 M2TS ka DVD
1.6 M2TS ka MOV
1.7 M2TS ka MPEG
1.8 M2TS ka WMV
1.9 M2TS ka MP3
1.10 tọghata Canon M2TS
1.11 tọghata Panasonic M2TS
2.2 Play M2TS na XBMC
Ma gụọ 2.3 Play M2TS na PlEX
3.2 M2TS ndepụta okwu
3.3 M2TS Ọ dịghị Sound
3.7 M2TS na breeki aka
3.9 Bulite M2TS ka YouTube
3,10 Jikọọ M2TS Files
Part 1: Gịnị tọghata m2ts ka mp3
Part 2: 2 ihe mere converting m2ts ka mp3
Nkebi nke 3: Olee otú iji tọghata m2ts ka mp3 mfe na ngwa ngwa na Windows na Mac
Mgbe ọ na-abịa internet ụwa mgbe ahụ n'elu ihe nile-enwe obi abụọ na mp3 format bụ a de facto ọkọlọtọ na bụ na iji nke a dị nnọọ ogologo oge nke oge ugbu a ọ na-eme n'aka na faịlụ na-abụghị nanị na-egwuri ma ha na-converted enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na mp3 format bụ na iji ebe 1993 iji jide n'aka na ndị ọrụ na-nyere na ndị kasị mma na ọrụ na faịlụ na-egwuri ire ụtọ na nwayọọ.
Mgbe ọ na-abịa banyere ihe ndị mere mgbe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na ihe mere dị ukwuu nke na-eduga onye ọrụ kwupụta na ntughari nke m2ts faịlụ ka mp3 faịlụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Na nke akụkụ a nke isiokwu ya ga-eme ka n'aka na uru nke mp3 format na-pụta ìhè dị ka ndị a uru nwekwara ike na-ahuta ka ihe iji jide n'aka na usoro converted enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ndị a uru ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ na-abịa mara banyere uru dị mfe asụsụ dị ka nke a ga-eme ka onye ọrụ aghọ maara nke eziokwu na-metụtara mp3 na ihe mere ọ na-eji dị ka de facto protocol maka ụda ebre n'ụwa nile.
The data size nke mp3 bụ kasị nta mgbe ọ na-abịa audio ebre formats nke yiri genre. IT pụtara na mp3 faịlụ extensions na-erughị ohere na disk-eme ka n'aka na ihe kasị mma na-nyere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ bụ ike dee a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ ka a disk ma ọ bụ ndị ọzọ okwu nwere ike dọwara a disk na nnukwu ego nke data enweghị ọtụtụ mgbalị. Na biakwa obibia nke mp3 faịlụ transfer nwekwara nnọọ mfe, pụrụ ịdabere na eri irè.
The mkpakọ ruru mgbe ofu ke mp3 usoro. Ọ pụtara nanị na a onye ọrụ nwere ike mpikota onu faịlụ ruo mgbe ọ na-aghọ dị na file size a ga-echekwara. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị eme usoro n'ụwa nile na onye ọrụ nwere ahia n'etiti audio àgwà na size nke faịlụ nke pụtara nanị na nta a file size bụ kasị njọ ga-audio àgwà na nke a. Ọ Otú ọ dị adịghị ewute ndị ọrụ ọtụtụ ikpe dị ka onye ọrụ bụ nchegbu mgbe nile banyere olu nke bụ ka a nụrụ na nke a.
Ọ bụ a format na na ọtụtụ-eji fọrọ nke nta niile ụda egwu na-akpọ ngwaọrụ na e mepụtara ebi. Na-a protocol mp3 format na-ebe nabatara Player na-mara maka egwu na-akpọ ndị dị otú ahụ faịlụ n'agbanyeghị na ha anam na mmepe. Iji nweta ya na okwu dị mfe ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na faịlụ na nke a na-abụghị nanị obere na size ma ndị ọrụ ugbu a na-ahụ na faịlụ na-converted mp3 na ọtụtụ ndị convertors na-ọma ọ dị ezigbo mkpa ka mara na mp3 format na-ahọrọ dị ka a ndabere onye na-eme n'aka na ọrụ adịghị nwere iji họrọ usoro oge na ọzọ nke na-egosi na convertor mmepe si n'ụwa nile jide n'aka na mp3 format e nyere ya ezi ebe.
Mgbe ọ na-abịa akakabarede n'elu Mac mgbe ahụ Wondershare na nke a ka mepụtara doro usoro ihe omume ga-eme ka n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge ọ bụla na akakabarede usoro dị mfe ndị na na mejuputa. Iji nweta usoro ogologo ọ na-gwara iji jide n'aka na nzọụkwụ nke e kwuru n'okpuru ebe na-soro dị ka ha bụ ka ndị mmadụ anaghị enweta n'ime ihe ọ bụla nke na-eji ihe omume a iji tọghata faịlụ dị ka kwa ha uche na ọchịchọ. Ojiji dị mfe na onye ọrụ dị nnọọ mkpa ka soro ntuziaka na e kwuru n'okpuru ebe a iji jide n'aka na nsonaazụ kacha mma na-n'ịwa n'ime chaachaa:
1. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html-agbaso iji jide n'aka na ihe omume ahụ ibudatara na arụnyere. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ọ na-ulo oru na tinye faịlụ button a pịrị iji jide n'aka na faịlụ na-kwukwara ka usoro ihe omume:
2. The elu akụ a na-ahụ na-pịrị iji jide n'aka na menu na-egosi site ebe a onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mmepụta ntọala na-họọrọ na setịpụrụ maka faịlụ a ga-converted:
3. The akakabarede button bụ mgbe ahụ na-pịrị iji jide n'aka na ihe omume na-amalite na-arụ ọrụ na onye ọrụ na-akawanye mmepụta dị ka kwa Ọkpụkpọ na ntọala na-ahọrọ na nke a:
Mkpa nke mp3 format nwekwara ike-ekpe ikpe site eziokwu na n'ihi na nnukwu nyiwe na OS dị ka windows na Linux Ọkpụkpọ arụ ọrụ dị ka a ndabere emekarị na ọ na-eme n'aka na ihe kasị mma ọrụ a na-nyere ka ndị na-eji dị otú ahụ sistem. Ọ bụkwa otu n'ime ndị formats na mgbe ezute ọ bụla njehie nke ụdị ọ bụla na okwu dị mfe ọ nwere ike kwuru na mo3 format bụ ụdị nke encounters obere njehie ka tụnyere ndị ọzọ formats na dị n'ahịa. Mgbe ọ na-abịa m2ts ka mp3 akakabarede mgbe ahụ e nwere ọtụtụ iri puku convertors n'ụwa nile nke na-n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri maka onye ọrụ na onye a na nkuzi nakwa na e dere iji jide n'aka na ndị needful na-eme na a n'ụzọ na- dị ebube, na-akwado na onwe reliant na akụkụ nile.
Olee otú Download / Record / tọghata AOL Radio Music ka MP3
> Resource> MP3> Olee otú iji tọghata m2ts ka mp3 na Windows na Mac